कपाल सिल्की र चमकदार बनाउन प्रयोग गर्नुहोस यी २ घरेलू टिप्स ! – MediaNP
कपाल सिल्की र चमकदार बनाउन प्रयोग गर्नुहोस यी २ घरेलू टिप्स !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००६:२३0
सिल्की, स्टेट र चमकदार कपाल बनाउने चाहना प्राय सबै महिलाहरु हुन्छ । महिलाहरु आफूले सोचेजस्तो कपाल नभएपछि विविध उपायहरु अपनाउन ब्युटि पालर जान बाध्य भएका छन् । बजारमा पाइने केलमुकलयुक्त सामाग्रीको प्रयोगले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा सिल्की, चमकदारको साथमा स्टेट बनाउन सकिदैन्, केहि समय यसको प्रयोगले असर नदेखिए पनि दीघकालिन रुपमामा भने थुप्रै असर देखापार्दछ ।
प्राकृतिक रुपमा सिल्की, चमकदारको र स्टेट कपाल बनाउने तरिका यस्ता छन्,
१. सबैभन्दा पहिले त कपाललाई नरम बनाउनु पर्दछ । यसको लागी सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको नरिवल वा जैतुनको तेलको प्रयोग गर्नुहोस् । तेललाई करिब १० मिनेटजति हल्का तातो बनाएर कपालमा २५ मिनेट जति मालिस गदै लगाउनुहोस्, करिब १ घण्टा त्यत्तिकै छोडेर कपाललाई मनतातो टाबेलले कपाल छोपी स्यापू लगाएर धनुहोस् । कपाल सिल्की, चमकदारको र स्टेट हुनेछ ।
२.कोकोनट मिल्कले कपाललाई स्टेट बनाउन सघाउँछ । यसमा एन्टी फंगलको साथमा विभिन्न किसिमको कपालका खराब ब्याक्टेरिया नष्ट गर्ने तत्व हुन्छ। जसले कपालको साथमा टाउँको पनि सफाइ गर्दछ । करिब एक जार पानीमा एक कप कोकोनट मिल्क र एउटा कागतीको रस निकालेर मिलाई केहि मिनेट छोडेर आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस् र २० मिनेट जति छोडेर स्विमिङ् क्याप लगाई तातो टाबेलले आधा घण्टा छोपी स्याम्पूले सफा गर्नाले मस्टराइजरको साथमा कपालमा साइनिग पनि आई कपाल सिल्की, चमकदारको र स्टेट हुनेछ । त्यस्तै एलोवेला र जैतुनको तेलको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मृगौला, लिवर लगायतका यी ७ रोगबाट बच्न खालिपेटमा खानुहोस् रातभर भिजाइएको किसमिस पानी !
यौन क्षमतामा कमजोरीपना वा रुची छैन भने, अब यसरी बढाउनुहोस् यौनशक्ति !